पाँडे र पौडेलको ‘हजार हाइकु’ बजारमा – rastriyakhabar.com
पाँडे र पौडेलको ‘हजार हाइकु’ बजारमा
काठमाडौँ । साहित्यकार द्वय रामकुमार पाँडे र प्रकाश पौडेल ‘माइला’को संयुक्त हाइकुसङ्ग्रह ‘हजार हाइकु’ बजारमा आएको छ । काठमाडौंको सि.डब्लु. रेष्टरेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्यक्रमका प्रमुख अथिथि बरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाले कृति बिमोचन गरे ।
पुस्तक माथी समिक्षा गर्दै समिक्षक महेश पौडेलले ‘हजार हाइकु’ हाइकु मात्र नभई हाइकुको इतिहास र संरचनाको जानकारी समेत भएको बताए । यस्तै अर्का समिक्षक दामोदर पुडासैनीले यो हाइकु सङ्ग्रह हाइकु प्रेमी तथा लेख्न र सिक्न चाहनेहरुको लागि पढ्नै पर्ने पुस्तक सावित भएको बताए । वरिष्ठ समिक्षक प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलले दुई लेखकहरू हाइकुको राम्रो संरचना र मर्म बुझेका लेखक भएको र यो कृति आफैमा उत्कृष्ट रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गीतकार रत्नसमशेर थापाले यो कृति नेपाली साहित्यको बजारमा हाइकु विधामा एक सशक्त र बलियो पुस्तकको रुपमा आएको बताए । कार्यक्रम कृति प्रकाशक एवम् शिखा बुक्सका पुष्पराज पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । २६२ पृठ भएको उक्त पुस्तकको मुल्य ३२५ रहेको छ भने पुस्तकलाई शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको हो ।
शुक्रबार, असार २२, २०७५ मा प्रकाशित